I-PowerInbox: Ipulatifomu Yokuthumela Imiyalezo Ephelele Ngendlela Eyenziwe Ngayo, Martech Zone
Njengabakhangisi, siyazi ukuthi ukubandakanya izethameli ezifanele ngomyalezo ofanele ngaphezulu kwesiteshi esifanele kubalulekile, kepha futhi kunzima kakhulu. Njengoba kuneziteshi eziningi namapulatifomu — kusuka ezinkundleni zokuxhumana kuye kwabezindaba bendabuko — kunzima ukwazi ukuthi ungayitshala kuphi imizamo yakho. Futhi-ke, isikhathi yisisetshenziswa esilinganiselwe — kuhlale kunokuthile okufanele ukwenze (noma ongakwenza), kunesikhathi nabasebenzi ukukwenza.
Abashicileli bedijithali bezwa le ngcindezi mhlawumbe ngaphezu kwanoma yimuphi omunye umkhakha, kusuka ezitolo zendabuko kuya kuma-recipe blogs, indlela yokuphila kanye niche, ukushicilelwa kwezintshisekelo ezikhethekile. Ngokwethembela kwabezindaba emhlabathini ontengantengayo, futhi okubukeka njengezindawo ezihlukene ze-gazillion zonke ezincintisana nokunakekelwa kwabathengi, ukugcina izethameli zibambe iqhaza akuyona nje into eza kuqala — kuyindaba yokusinda.
Njengoba abathengisi bazi, abashicileli bathembele ekukhangiseni ukugcina izibani zikhanya namaseva ekhala. Futhi siyazi futhi ukuthi ukuthola lezo zikhangiso phambi kwezithameli eziqonde ngqo kubalulekile ekushayeleni imali. Kepha njengoba amakhukhi wenkampani yangaphandle engasasebenzi, ukuqondiswa kwezithameli sekuyinselelo enkulu kakhulu.
Abathengi banamuhla balindele okuphezulu ngokwedlulele ekwenzeni ngezifiso zabo — empeleni, cishe abathathu kwabane bathi ngeke bahlanganyele ngokuqukethwe kokumaketha ngaphandle kokuthi kwenziwe ngendlela oyithandayo. Lokho kubakhathaza kakhulu bobabili abashicileli nabakhangisi — ukuhlangabezana nalelo zinga eliphakeme kuya ngokuya kuba nzima njengoba ukukhathazeka kwangasese kwedatha kushayisana namazinga aphezulu wokwenza kube ngokwakho. Kubonakala sengathi sonke sibanjwe ku-Catch 22!
Ipulatifomu ye-PowerInbox ixazulula ifayela le- okuyindida / okomuntu siqu yabashicileli, ibavumela ukuthi bathumele imiyalezo ezenzakalelayo, eyenziwe yaba ngeyakho kubabhalisile nge-imeyili, iwebhu, nezaziso zohlelo lokusebenza — iziteshi zokungena ngokugcwele. Nge-PowerInbox, noma yimuphi umshicileli wosayizi angathumela okuqukethwe okulungile kumuntu ofanele ngaphezulu kwesiteshi esifanele ukushayela impendulo.
Ukwenza Okuthandwa Nguwe Nge-imeyili
Nakhu ukuthi kusebenza kanjani: Okokuqala, i-PowerInbox isebenzisa ikheli le-imeyili lababhalisile-hhayi amakhukhi - ukubakhomba kuzo zonke iziteshi. Kungani i-imeyili?
Kukhethwe ukungena, ngakho-ke abasebenzisi babhalisa / bavuma ukwamukela okuqukethwe, ngokungafani namakhukhi asebenza ekusithekeni.
Kuyaphikelela ngoba kuboshelwe kumuntu uqobo, hhayi ithuluzi. Amakhukhi agcinwa kudivayisi, okusho ukuthi abashicileli abazi ukuthi ngumsebenzisi ofanayo lapho besuka ekusebenziseni i-iPhone baye kwi-laptop yabo. Nge-imeyili, i-PowerInbox ingalandelela ukusebenza komsebenzisi kuwo wonke amadivayisi nakuzo zonke iziteshi futhi ikhombe okuqukethwe okulungile ngokufanele.
Kunembe kakhudlwana. Ngenxa yokuthi amakheli e-imeyili awavamile ukwabiwa, idatha ihlukile kulowo muntu, kanti amakhukhi aqoqa idatha kuwo wonke umsebenzisi waleyo divayisi. Ngakho-ke, uma umndeni wabelana ngethebulethi noma ilaptop, ngokwesibonelo, idatha yamakhukhi ingumbombayi womama, ubaba, nezingane, okwenza ukukhomba kube nzima. Nge-imeyili, imininingwane iboshelwe ngqo kumsebenzisi ngamunye.
Lapho i-PowerInbox ikhomba obhalisile, injini yayo ye-AI ifunda ukuthi izintshisekelo zabasebenzisi ngokuya ngokuncamelayo okwaziwayo nokuziphatha ukwakha iphrofayili yomsebenzisi eqondile. Okwamanje, isixazululo siphinde sithinte okuqukethwe kwabashicileli ukufanisa okuqukethwe okufanele nabasebenzisi ngokuya ngephrofayili yabo eyaziwayo nemicimbi ngesikhathi sangempela.
I-PowerInbox bese iletha ngokuzenzakalela lokho okuqukethwe okuhlanganisiwe kubasebenzisi nge-imeyili yewebhu noma isexwayiso sesaziso ngokuya ngokuthi isiphi isiteshi esikhombise ukushayela ukuzibandakanya okuphezulu kakhulu. Njengoba ipulatifomu isebenza, ihlala icwenga uketshezi lokuqukethwe futhi ivuselela ngokuqhubekayo imodeli yokwenza ngokwezifiso eziqonde ngokwengeziwe.
Ngoba okuqukethwe kubaluleke kakhulu futhi kuyasebenziseka, ababhalisile banamathuba amaningi okuchofoza, ukushayela ukuzibandakanya kanye nemali engenayo yokuqukethwe okwenziwe imali kwabashicileli. Okungcono nakakhulu, i-PowerInbox inikeza izinketho zokwenza imali ezakhelwe ngaphakathi, okuvumela abashicileli ukuthi bafake okuqukethwe kwesikhangiso ngqo kuma-imeyili abo bese becindezela izaziso.
Ukusetha kwepulatifomu kokusetha-nokukhohlwa-kuvumela abashicileli ukuthi bagcine izethameli zisebenza ngokuqukethwe okukodwa ngakunye nganoma yisiphi isilinganiso — into engenzeki ngenye indlela ngaphandle kwepulatifomu ye-PowerInbox ezenzakalelayo. Futhi, ngoba ukufakwa kwesikhangiso kwenzeka ngokuzenzakalela, kusindisa abashicileli isikhathi esiningi ekufomethweni nasekuthengisweni kwempahla. Iphinde ihlangane ne-Google Ad Manager, ivumela abashicileli ukuthi badonse ubuciko besikhangiso ngqo kusuka ku-inventory ekhona ye-inthanethi cishe kungekho mzamo.
Kungani Abathengisi Kufanele Bakhathalele
Ipulatifomu ye-PowerInbox kufanele ibe se-radar yabathengisi ngezizathu ezimbili:
Cishe wonke umkhiqizo ungummemezeli kulezi zinsuku, usabalalisa okuqukethwe kwebhulogi, ukukhushulwa kwe-imeyili kanye nezaziso zohlelo lokusebenza kubabhalisile. Abamakethi futhi bangasebenzisa ipulatifomu ye-PowerInbox ukuphatha ukwenziwa kokuqukethwe kwe-multichannel nokusatshalaliswa, ngisho nokwenza imali. Ama-Brands angafaka izikhangiso zozakwethu kuma-imeyili abo noma alahle izincomo zomkhiqizo wabo ezikhethiwe njenge- “ads” kuma-imeyili abo okuthengiselana, asikisela ukuthi amanye amagilavu ​​amahle ahambisane nalawo mabhuzu amasha, isibonelo.
Ukukhangisa nabashicileli bedijithali usebenzisa ipulatifomu ye-PowerInbox kuyithuba elihle lokubeka umkhiqizo wakho phambi kwezithameli eziqondiswe kakhulu nezibandakanyekile. Ngisho nangaphambi kokuba kube khona ubhadane, 2/3 ababhalisile bathi bazocofa isikhangiso encwadini yezindaba ye-imeyili. Ezinyangeni eziyisithupha ezedlule, iPowerInbox ibone ukwanda kwama-38% kokuvulwa kwe-imeyili, okusho ukuthi ukubandakanyeka kwe-imeyili kuyakhuphuka. Futhi abasebenzisi abangama-70% sebevele babhalisela ukuphusha izaziso, ngakho-ke kukhona amandla amakhulu lapho, futhi.
Njengoba izethameli zilindele okuningi kubakhangisi maqondana nokwenza ngezifiso nokuqukethwe okwenziwe ngokwezifiso, amapulatifomu afana ne-PowerInbox ahlinzeka nge-AI kanye ne-automation engasivumela ukuthi sifeze lawo mazinga aphezulu ngezinga. Futhi, ngokunikeza izethameli zethu okuningi kwalokho ezikufunayo, singakha ubudlelwano obuqinile, obusebenzisana kakhulu obuqhuba ukwethembeka nemali engenayo.
Thola i-PowerInbox Demo
Tags: ukwenza ngezifiso i-imeyiliipulatifomu yemiyalezoimiyalezo eminingiamandla
UJeff usebenza njenge-CEO ye-PowerInbox, inkampani yezobuchwepheshe entsha esiza izinkampani ukuthi zenze imali ngezincwadi zazo ze-imeyili ngokuqukethwe okunamandla. Ngaphambi kokujoyina i-PowerInbox, uJeff wasebenza njengoMongameli kanye ne-CEO kuOversee.net, ephethe ukusebenza komhlaba wonke nokwakha iphothifoliyo ephethwe futhi eqhutshwa ngamagama wesizinda e-Oversee yaba ngelinye lamakhulu kunawo wonke emhlabeni, esungula inkampani njengomholi we-Internet real estate. Ngaphansi kobuholi bakhe, inkampani yahlukahluka yaba yisizukulwane esiholayo, yakha amabhizinisi amaningana okukhula okuphezulu kanye ne-margin ephezulu. Ngaphambi kwalokho, uKupietzky wasebenza ezikhundleni zobuholi ngeX1 Technologies, Digital Insight (Intuit), iSiebel Systems (Oracle), neLoudcloud / Opsware (Hewlett-Packard). UJeff waqala umsebenzi wakhe wokuba ngumxhumanisi weMcKinsey & Co, esungula amasu ebhizinisi wesoftware, umshuwalense namakhasimende asebhange. Isikhulumi esivamile ezingqungqutheleni ze-Digital Media, ubuye waboniswa naku-CNN, CNBC, nakumagazini amaningi wezindaba nakwezamabhizinisi.